Ngaba andikwazi ukubeka iphasiwedi kwi-Terminal application | Ndisuka mac
Indawo yokukhwelela Sisicelo esifakwa ziinkqubo zethu zonke zeMac. Ngokubanzi, ungumsebenzisi we "ngenyawo" akayazi okanye nokuba simxelela ukuba asebenze nayo, uziva enxunguphalo oluthile xa echukumisa into akufuneki kwaye ayazi ukuba ubuyela njani kwinqanaba langaphambili. Sesinye sezona zicelo zilula kwaye singasichaza njenge "krwada" kodwa ukusebenza esikunikwa sisicelo akunakubalwa. Ukuba uvuse umdla wakho, ukuqala ungajonga kwinqaku elipapashwe ngumlingane wethu: Uluhlu luluhlu njani kuyo yonke imiyalelo yesiphelo, okanye ufumane izicelo ezininzi kwiwebhusayithi yethu.
Nje ukuba sibe ngaphakathi kwiTheminali, Singayenza imiyalelo yenkqubo yokwenza isenzo sangaphakathi. Umzekelo: cima ii-cache, coca i-RAM, susa iimpazamo ezithintela inkqubo ukuba ihambe kancinci, phakathi kwezinye ezininzi.
Ukwenza naliphi na kula manyathelo, kufuneka ufikelele kwimaleko yenkqubo efuna ngenisa igama eligqithisiweyo lenkqubo. Kuqhelekile, kuba abaphuhlisi beApple bafuna ukuba siqiniseke ngento esiyenzayo kwaye sithintele nomnye umsebenzisi weMac yethu ekubeni ayichukumise ngempazamo.
Ke ngoko, ukuza kuthi ga ngoku, xa ibuza "iphasiwedi" ulwazi lwalubhaliwe kwaye sabona ukwaziswa kwephasiwedi ngamachaphaza. Kwelinye icala, kuhlaziyo lokugqibela lwenkqubo, xa igama eligqithisiweyo livela kwaye siqala ukuchwetheza igama eligqithisiweyo, amachaphaza awaveli, kwanokunika umbono wokuba inkqubo ivaliwe. Akunjalo, ngoku ayibuyiseli isitshixo sokuchofoza kwiqhosha ngalinye kwi-password. Emva kokucinezela ukungena, inkqubo iyayiqonda kwaye iqale inkqubo eceliweyo.
Andazi ukuba kutheni isenziwa ngale ndlela, kodwa kufuneka nditsho ukuba ukuza kuthi ga ngoku kungena igama eligqithisiweyo, isebenza njengakwenzile kude kube ngoku. Ukuqala kwakhona ikhompyuter akusenzi sibuyele kwinkqubo yangaphambili nokuba..
Siyathemba ukuba iApple iyakulawula kolu tshintsho, oluya kuthi ngokuqinisekileyo lube nesizathu okanye inkcazo yokuba kude kube ngoku asazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Kutheni le nto ndingenakubeka iphasiwedi yam kwiNkqubo yesiphelo
Isizathu sokuba ndicinge ukuba sisesinye isizathu sokuba xa ufaka ipassword kwisixhobo se-iOS, ikhibhodi "ucofa" ayivakali, ukuthintela ukunika imikhondo malunga nenani labalinganiswa elinalo.
Kuqhelekile kuninzi lweetheminali njengangoku kwi-linux okanye kwi-iTerm ye-mac (bash, zsh). Yokhuseleko: sukutyhila ubude begama eligqithisiweyo kwiscreen.
Abahamba Komoya: Ukuthuka uMthakathi waseCypress, Simahla simahla kwiXeshana eliMiselweyo